Alshabaab Oo U Hanjabtay Dowlada Britain | Mareergur.com	Wednesday, June 19th, 2013	Home
Alshabaab Oo U Hanjabtay Dowlada Britain
Oct 23, 2012 - Comments off	Xarakada Al-Shabaab ayaa markii u horeysay ku hanjabtay in weeraro qaraxyo ah ka geysaneyo dalka Britain, iyadoo ay sheegtay in tallabaadaas ay jawaab u tahay sidii dowladda Britain kula dhaqantay wadaad diimeedka Abuu Xamza, kaasoo dhowaan ay u gelisay dowladda Mareykanka.
War lagu daabacay bogga Twitter-ka ee Al-Shabaab leedahay ayaa lagu sheegay in qaraxyo halis ah ay ka geysan doonaan Britain, waxaana ay ku eedeysay Britain inay hormuud u tahay dagaalka ay kula jirto Islaamka.
“Britain waxaan ka fulin doonaa qaraxyo la mid ah kuwii ka dhacay 07-02-2005-tii”ayaa lagu yiri warka la soo dhigay barta Twitter-ka ee Al-Shabaab leedahay, inkastoo aanay carabaabin magaalo ay si gaar ah u beegsaneyso.
Dowladda Britain ayaa dhowaan u gacan gelisay Mareykanka wadaad diimeed xag-jir ah, kaasoo lagu magacaabo Abuu Xamza, waxaana lagu eedeeyay inuu xiriir dhow la lahaa Hogaamiyihii hore ee Al-Qaacida Usama Bin Laden.
Warbixinta la soo dhigay bogga Twitter-ka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Britain ay dhibaatooyin u geysato dad Muslimiin ah oo aan waxba galabsan, isla markaana ay caqabad kala kulmi doonto dhibaateynta dadka Muslimiinta.
Bishii July ee sanadkii 2005-tii ayay aheyd markii weeraro qaraxyo lagu qaaday Tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada London, kaasoo ay ku dhinteen ilaa 52-ruux.
Britain ayaa xulufo la ah Mareykanka iyo dalalka kale ee reer Galbeedka dagaalka loogu magac daray la dagaalanka Argagixisada, iyadoo kumanaan ciidan ka joogaan dalka Afganistan.
Hanjabaada ka soo yeertay Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa ku soo aadeysa, iyadoo horay Britain ay walaac uga muujisay dhalinyaro Soomaali Britain ah oo ka bar bar dagaalama Shabaab inay qaraxyo ka fuliyaan gudaha dalkeeda.